यसकारण दोधारमा परे माधवकुमार नेपाल ! - Dainik Online Dainik Online
यसकारण दोधारमा परे माधवकुमार नेपाल !
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल आफ्नो पक्षका नेताले दुई थरी सुझाव दिएपछि दोधारमा देखिएका छन्। नेपाल पक्षको दुई दिन चलेको बैठकमा अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्ने र नयाँ पार्टी बनाएर जानुपर्ने गरी दुई धार देखिएको छ। एउटा निश्कर्षमा पुग्न राखिएको बैठकमा दुई लाइन देखिएपछि के गर्ने भनेर नेपाल दबाबमा परेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ।
नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै अझै एकताका लागि संघर्ष गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल दोधारमा परेका हुन्। घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत नेता पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू ओली पक्षसँग निरन्तर संवादमा छन्।
कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वालासहित जगन्नाथ खतिवडा, डा। विजय पौडेल, राजेन्द्रकुमार राई वार्ता रोकेर नयाँ बाटो तय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको भन्दै भुलभुलैयामा लागेर अल्झन नहुने लिखित ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्।